Samachar Batika || News from Nepal » के भगवान् श्री कृष्णका १६ सय गोपिनी थिए त ? थाहा पाउनुहोस ।
के भगवान् श्री कृष्णका १६ सय गोपिनी थिए त ? थाहा पाउनुहोस ।
भगवान कृष्णलाई हिन्दु धर्मवलम्विहरुले सृष्टिकर्ता विष्णुको अर्को रुप मान्ने गरेका छन् । भगवान कृष्ण सबैको दृष्टिकोणमा अत्याधिक आकर्षक भएको कुरा दन्त्यकथाहरु र कृष्णको नाममा बनेका विभिन्न कार्टुन, फिल्महरुमा सुन्न र देख्न पाइन्छ ।
“सर्व आकर्षित कृष्ण” । भगवान कृष्णको अर्थ आकर्षण पनि हो । यो नामले प्रकृतिको वर्णन गर्दछ, सत्य व्यक्तित्वको वर्णन गर्दछ । कृष्णमा अद्भूत आकर्षण भएरै उनी धेरैका प्रीय बने । १६ सय गोपिनीका प्रीय बने । प्रेम र आकर्षणको प्रतिक हुन् कृष्ण ।
भगवान कृष्णको आगमन कानुन कायम गर्न मात्र नभएर संसारमा माया प्रेम जगाउन पनि भयो । जब हामी कृष्णलाई माया गर्छौं, हाम्रो प्रेममा कहिले रुकावट हुँदैन, कहिल्यै विश्वासघात हुँदैन, कहिल्यै निराश हुँदैन, कहिल्यै निराश हुँदैन । प्रेमको अर्को रुप हुन् भगवान कृष्ण ।
प्रकाशित मिति १० माघ २०७६, शुक्रबार १५:३९